बिहीबार, जेठ १२ २०७९ ०४:४८ PM
बिहीबार १२ जेठ २०७९ ०२:४० PM
नेपालमा नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसाय प्रवर्धन पहिलोपटक आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को वार्षिक बजेटमा प¥यो जसमा स्टार्टअपहरूलाई सहयोग गर्ने भनेर पहिलो पटक ५० करोड रुपैयाँको कोष खडा गरिएको थियो । सो कोषको उद्देश्य स्टार्टअप सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीलाई बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने थियो । त्यसयताका हरेक बजेटमा कुनै न कुनै किसिमले स्टार्टअपका कार्यक्रम समेटिएका छन् । बीउ पुँजी, च्यालेञ्ज फन्ड, अनुदान, सहुलियत कर्जा वा विभिन्न शीर्षकमा कार्यक्रम घोषणा भइरहेका छन् ।
औद्योगिक वर्गीकरण र तीन तहको सहुलियत व्यवस्था
बुधबार ११ जेठ २०७९ ०२:५५ PM
नेपालमा उद्योग लगाउनै नसकिने गरी भूमिको मूल्य बढेको छ । जग्गा किनेर उद्योग लगाउन सक्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्यो । सरकार आफैंले उद्योग राख्न जग्गा उपलब्ध गराउने नीति आउनुपर्यो । सरकार अहिले बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । बजेटले उत्पादनको लागत कसरी घटाउने भनेर हेर्नुपर्छ ।
बुधबार ११ जेठ २०७९ १०:२३ AM
सोमबार ९ जेठ २०७९ ०४:१२ PM
इन्धनको मूल्य वृद्धिले निम्तिन सक्ने खाद्य संकट र समाधानको उपाय- शेखर गाेल्छाकाे विचार
आइतबार​ ८ जेठ २०७९ ०६:१० PM
इन्धनको मूल्य बढदा ढुवानी र उत्पादनमा लागत बढन गई यसै पनि बजार भाउ बढने गर्दछ । कोभिड पछि विश्व नै तंग्रिन खोज्दा बजारमा चाप पर्दै गइरहेको थियो । यही बीचमा रुस युक्रेन युद्धले मूल्य थप बढाइ दियो ।
बिमा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, शिखर इन्स्योरेन्सका सीईओ पाण्डेको विचार
आइतबार​ ८ जेठ २०७९ १२:५८ PM
दाबी भुक्तानीको सबैभन्दा बढी समस्या यातायातमा छ । ३/४ वर्षदेखि डकुमेन्ड नदिएर दाबी भुक्तानी नभएका कैयौं केस शिखरमा छन् । सबै तिरेका छौं भनेर फुर्ति लगाउन पनि सकिँदैन र तिरेकै छैनन् भनेर आरोप लगाउन सकिने ठाउँ पनि छैन ।
शुक्रबार​ ६ जेठ २०७९ ०८:०९ AM
औषधि उद्योग तथा भेटनरी उद्योगलाई सप्लाई गर्ने उद्देश्यले स्थापित स्वदेशी प्याकेजिङ उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा उद्योग विभागको सिफारिसमा आवश्यक परिमाणसम्मको आयातमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार दर कायम गर्नुपर्छ ।
गाडी उद्योग खोल्न प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेख सुविधालाई यथावत् राख्दै नयाँ थप्नुपर्छ
बिहीबार ५ जेठ २०७९ ०२:२० PM
एउटा सरकारले बजेटमा एउटा कुरा समेट्छ, अर्को सरकारले हटाइदिन्छ । धरापमा रहेर कुनै लगानीकर्ता लगानी गर्न चाहँदैनन् । त्यही भएर हामीले बारम्बार भन्दै आएको छौं– नीतिगत सुधार होस् ।
बुधबार ४ जेठ २०७९ ०२:३३ PM
अहिले सरकारले विदेशी मदिरा आयातमा रोक लगाएको छ । तास आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । विदेशी पाहुँनाले चाहेको मदिरा खान पाएन भने उ नेपाल किन आउँछ ? विदेशीले क्यासिनोमा गएर तास खेल्न पाएन भने उ नेपाल किन आउँछ ? तास क्यासिनोको मुख्य कच्चा पदार्थ हो ।
मङ्गलबार ३ जेठ २०७९ ०५:०६ PM
मङ्गलबार ३ जेठ २०७९ ०९:४४ AM
बजेटले स्टार्टअपको महत्व बुझ्न सक्नुपर्छ
बिहीबार २९ बैशाख २०७९ ११:५० AM
बुधबार २८ बैशाख २०७९ ०२:३२ PM
सोमबार २६ बैशाख २०७९ ०६:०० PM